Ijoo Dubbii ABO : Odeeffannoo Dogoggorsaa Ummataaf Kennuun Rakkoo Darbe Ittti Deddeebu’uuf Karaa Saaquu Taha – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIjoo Dubbii ABO : Odeeffannoo Dogoggorsaa Ummataaf Kennuun Rakkoo Darbe Ittti Deddeebu’uuf Karaa Saaquu Taha
Via: Sagalee Bilisummaa Oromoo
OPDO’n kun maaliif dhaabbileen Oromoo ABO dabalatee akka ishee jalatti cafaqamu feeti? Maaliif safuu wallaaltii? Maaliif hangafa wallaaltii? Dhaloonni hundi OPDO’n ilmoo Wayyaanee ta’uu nibeeka. Kanaaf, maqaa qofa utuu hintaane, qalbiillee jijjiirradhaa jechaa turre. Oromoo! Lammaa Magarsaafi Dr. Abiy’n jaallachuun sirna OPDO jaallachuu miti. Sirni OPDO kan Addisu Arega oofu kun akka badu, warri akka Lammaafi Dr. Abiy ammoo qabsoo keenya faana akka tarkaanfatan Oromoon barbaada. Hundaarra caalaa Oftuulummaan OPDO kun keessaa jiguu qaba. Keessumaa yeroo isheen ABO safuu dhowwaatti isheera fokkisa. Kunuu bara fide jedhamee ABO’n marcuma tokkorra faanashee taa’ee jennaan sirna Wayyaanee ruurrufte sanaan of wallaalaa jirti. Silumaa ABO’n nama farroo akka Addisu Arega Kitessakana faana waltajjii tokkorra taa’ee mariyachuun of salphisuusaati. WBO akaayii nyaatee sabasaa bilisa baasaa jiruun hiikkadhu yeroo jettu, kan qabsoofi hadhaa qabsoo utuu hinargiin Oromoo qulqulluu basaasuun marcuma dhaalte kun ABO faana taa’uunmataansaa yakka. ABO’nis maaliif akka of xiqqeesse naaf hingalle.Oromoon kan barbaadaa jiru, Oromoo kan ta’e hundi hidhatee akka of kabachiisudha